3phase induction motor for sale noocyada iibka saaraha qiimaha ac motor
3phase induction ac soo saaraha matoor iib ah
3 wejiga induction matoorada iib ah
Matoorka 3 waji ee ugu isticmaalka badan, 3 weji dabagaalle matoorka kicinta.
Dhammaan noocyada saddexda weji kicinta matoorka, teco 3 wejiga induction motor
Halkan ka hel 3 weji koronto oo tayo sare leh
Saddex-waji AC waxay leedahay saddex ilood oo awoodda AC ah, dhammaan ka baxsan marxalad kasta oo kale. Saddexda marxaladood ee matoorada qulqulka qulqulka ee matoorada waxaa lagu kala saaraa 6 nooc oo kala duwan. hindi.
Waxaan bixinaa 158 teco 3 weji soo saarista matoorka.
Matoorka induction wuxuu u wareegayaa iyadoo ay ugu wacan tahay goobta magnetic wareega ee 3 wejiga induction motor, 4 pole motor 3 wejiga, samaynta 3 weji fudud oo kicinta wareegga kontoroolka xawaaraha mootada.
Nooca Matoorka Soo-gelinta Saddexda Waji
Sadexda waji ee giraanta induction matoorka ayaa loo isticmaali karaa fiilooyinka warshadaha halkaasoo xawaaraha isbedbedelka ah iyo wareegga bilowga sare ay yihiin shuruudaha ugu muhiimsan.
Noocyada 3 wejiga kicinta matoorka
3 marxaladda Dabagaalle qafiska matoorka
Waxaa jira laba nooc oo ah 3 weji qafis dabagaalle induction motor oo ku salaysan nooca dhismaha ee Rotor. Xakamaynta xawaaraha 3-wajiga induction motor isticmaalaya rotor impedance. Sadexda waji giraanta induction matoorka waxaa loo isticmaali karaa fiilooyinka warshadaha halkaas oo xawaaraha variable iyo bilowga sare. Wareegga waa shuruudaha ugu muhiimsan. Noocyada saddexda marxaladood ee matoorka soo-gelinta ee aan keenayno waxaa loogu talagalay Dabaqalaha Cage Induction Motor. Matoorka Jilitaanka Ring-ga Sibidhka ama Rotor Rotor-ka-dhalinta Matoorka ama Jilitaanka Matoorka Dhaawaca Wejiga. 50 Hz ama 60 Hz qafiska matoorada, sidoo kale goobta korantada, Isku-darka, Sibidhka, Kiimikada, Saliidda, Cuntada Gaaska iyo sibidhka iwm.
Iibka Warshadaha iyo Adeegga Dayactirka: Matoorada, Bambooyinku, Sanduuqyada Gearbox, Rog-rogayaasha, iyo Kor-u-qaadista Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waad nala soo xiriiri kartaa, waan ku farxi doonnaa inaan ku caawinno! Kooxdayada xirfadda sare leh waxay kaa caawinaysaa inaad iska ilaaliso wakhtiga dhimista oo aad shaqada ku soo noqoto si aad welwel la'aan ugu ahaato. Maanta na soo wac! Waxaan u qaadan tayada sida faa'iidada iyo qiimaha ugu hooseeya waa daacadnimo. Kooxdayada xirfadda sare leh waxay kaa caawinaysaa inaad iska ilaaliso wakhtiga dhimista oo aad shaqada ku soo noqoto si aad welwel la'aan ugu ahaato. Maanta na soo wac!
Hadda aan wada sheekaysanno!